နေ့များ: ၁၀။ သိပ္ပံ၊ ဥပဒေ၊ အနုပညာ၊ အာဏာ၊ ငွေ
၁၀။ သိပ္ပံ၊ ဥပဒေ၊ အနုပညာ၊ အာဏာ၊ ငွေ
မော်ဒန်ဝါဒ (Modernism) ၏ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် မော်ဒန်ဖြစ်မှု (Modernity) ရှိသည်။ သို့သော်ကျနော်တို့ မော်ဒန်ဝါဒကိုငြင်းပယ်နိုင်သော်လည်း မော်ဒန်ဖြစ်မှုကိုမငြင်းပယ်နိုင်ပါ။ ထပ်ဆိုရလျှင် အနုပညာသမားတယောက်သည် မော်ဒန်အနုပညာဖန်တီးမှုကိုရှောင်လွှဲနိုင်သော်လည်း မော်ဒန်ဖြစ်မှုကိုမရှောင်လွှဲနိုင်ပါ။ မော်ဒန်ဖြစ်မှုဆိုသည်မှာ မော်ဒန်ဟု သတ်မှတ် ထားသောခေတ်ကာလအပိုင်းအခြားတခုအတွင်းရှိ ထင်ရှားစွာလွှမ်းမိုးထားသော စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ယဉ်ကျေးမှု၊အဖွဲ့အစည်း နှင့် အတွေးအခေါ်များကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဟာဘားမား၏ဆိုရှယ်သီအိုရီသည် မော်ဒန်ခေတ်လူမှုဘ၀ကို ဝေဖန်ရင်းအဖြေရှာထားခြင်းဖြစ်သည်။ မော်ဒန်နတီထဲတိမ်မြုပ်နေသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖော်ပြ ထားခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
အလယ်ခေတ်မှအစပြုပြီးနှစ်ဆယ်ရာစုခေတ်နှောင်းပိုင်းအထိ အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ကျယ်ပြန့်သော သမိုင်းဖြတ်သန်းမှုတွင် ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲတခုရှိခဲ့သည်။ ခရစ်ရှယန်ရှေးရိုးစဉ်လာဟောင်းမှ ခွဲထွက်လိုက်သော ဘာသာရေးအစွဲအလန်းကင်းသည့် ကျင့်ဝတ်ပုံစံတခုပေါ်ထွန်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပြောင်းအလဲပေါ်တွင် ဟာဘားမားက လူမှုဖွံ့ဖြိုးမှုယုတ္တိ နှင့် လူမှုဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသီအိုရီ တို့ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ တဘက်တွင် ဆင်ခြင်မှုပေါ်အခြေခံသော မျက်မှောက်ခေတ်သဘာဝသိပ္ပံပညာသည် အလယ်ခေတ်၏ အရစ္စတိုတယ်အစဉ်အလာနှင့် နောက်ပိုင်း ခရစ်ရှယန် ကျောင်းတော်၏လွှမ်းမိုးမှု ကိုကျော်လွန်ပြီး များစွာ တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဟာဘားမားသည် Validity Claim သုံးခု ကို Discourse သုံးမျိုးနှင့် သာမက Lifeworld ကိုပါသုံးပိုင်းခွဲပြီးချိတ်ဆက်ထားခဲ့သည်။ Lifeworld သုံးခုမှာ Scientific – Technical, Moral – Legal နှင့် Aesthetic – Expressive တို့ဖြစ်သည်။ Scientific နှင့်ဆက်စပ်သည့် Lifeworld သည် နည်းပညာနှင့်ဆိုင်သည့် လူမှုဘ၀၊ Moral နှင့်ဆက်စပ်သည့် Lifeworld သည် ဥပဒေ နှင့်ဆိုင်သည့် လူမှုဘ၀၊ Aesthetic နှင့်ဆက်စပ်သည့် Lifeworld သည် အနုပညာ နှင့်ဆိုင်သည့် လူမှုဘ၀၊ ဟုညွှန်းဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ Lifeworld ဆိုသည့်စကားလုံးကို အက်မွန်ဟတ်ဆယ် (Edmund Husserl 1859 – 1938) က လူတွေတဦးနှင့်တဦး ကူးလူးဆက်ဆံကြသည့်နေ့စဉ်ဘ၀ ကိုရည်ရွယ်ပြီး စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ဟတ်ဆယ်သည်ထင်ရှားသည့်ဂျာမန် တွေးခေါ်ရှင်တဦးဖြစ်ပြီး ဟိုက်ဒက်ဂါ၊ ဆာ့တ် နှင့် နောက်ပိုင်း ဒါရီဒါ အထိပါသြဇာသက်ရောက်ခဲ့ သူတဦးဖြစ်သည်။ ဟာဘားမားအသုံးပြုသည့် Lifeworld သည် လူသား၏ Social Life (မိသားစု၊ လူမှုရေး၊ ပါတီအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မသက်ဆိုင်သောနိုင်ငံရေး၊ စသည်တို့) သက်သက်ကိုရည်ရွယ်သည်။ Lifeworld သည်ဘာသာစကား (တနည်းဆိုသော် Communication) ပေါ်တွင် အခြေခံဆက်ဆံသည်ဖြစ်သဖြင့် လူမှုပြဿနာများကို Communicative Action ဖြင့် ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ တဆင့်တက်သော် Validity Claim နှင့် Discourse၊ ကျိုးကြောင်းဆက်သဘောညီမှု တို့ဖြင့်သာ ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
System တွင်နှစ်ပိုင်းရှိပြီး တပိုင်းမှာ အရင်းရှင်စီးပွားရေးစံနစ်၊ ကျန်အပိုင်းတွင် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား နှင့်ပတ်သက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။ အချုပ်မှာ ငွေ နှင့် အာဏာ သာဖြစ်သည်။ Lifeworld တွင် Communicative Action ဖြင့်စခန်းသွားသလို System တွင် Instrumental Action ကအခရာကျသည်။ အာဏာနှင့်ငွေ သည် လူသား၏ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀မျက်နှာပြင်ဝယ် နက်ရှိုင်းသော အရေးအစင်းကြောင်းများ ကိုထင်စေခဲ့သည်။ လူသားကို ကြိုတင်သိမှတ်ထားသော မိမိလိုအပ်ချက်ကိုသာ အလေးပေးစေသော အမူအကျင့်(Instrumental behavior) ဘောင်ထဲဆွဲသွင်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီတခုတွင် စီအီးအိုသည်လည်းကောင်း၊ စာရေးစာချီဝန်ထမ်းသည်လည်းကောင်း ငွေကိုသာမျက်နှာမူထားကြသည်။ ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ မရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ မန်ချက်စတာအသင်း အားပေးသူများသည် ကလပ်အသင်းရှယ်ယာဝင်များ ကိုငွေရှာပေးနေသူများပဲဖြစ်သည်။ သို့သော် Liveworld တွင် လူမှုပေါင်းစည်းမှု (Social Integration) ရှိသလို System တွင်လည်း စံနစ်ပေါင်းစည်းမှု (System Integration) ရှိသည်။စက်မှုခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး နောက်ပိုင်း မော်ဒန်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ပိုမိုကျယ်ဝန်းရှုပ်ထွေးလာသည်။ လူတွေကပိုပြီးရွှေ့ပြောင်း လာနိုင်ကြသည်။ လူမှုပေါင်းစည်းမှုသည်ပိုပြီးခက်ခဲလာသည်။ ဒါကို စီးပွားရေး နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး (System) အဖွဲ့အစည်းတွေ ကညက်ညောစေသည် ဟုဟာဘားမားကဆိုသည်။ ဒါသည်ပင်ဟော့ကိုင်းမားနှင့်အာဒိုးနိုးတို့၏ အရင်းရှင်စီးပွားရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး အဆိုးမြင်မှုမှ ခွဲထွက်သည့် သူ၏ သုံးသပ်ချက်တခုဖြစ်သည်။
System သည် Lifeworld အထိုင်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ မိသားစု၊လူမှုရေး၊ယဉ်ကျေးမှု ဘ၀သည်သာ ဦးစားပေးဖြစ်ရမည်။ ငွေကြေးနှင့် ဗျုရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေး (System) က Lifeworld ကိုပြန်ပြီး ချုပ်ကိုင်ထားဖို့မဟုတ်ပေ။ သို့သော် လက်တွေ့တွင် ငွေ နှင့် အာဏာသည် မိသားစု၊ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုးများမှဖယ်ခွာလာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို လက်အောက်ခံအဖြစ်ကိုပင်ရောက်အောင်ပင်သိမ်းသွင်းလာခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်မှာ ဟာဘားမားစကားဖြင့်ဆိုရသော် လူမှုဝေဒနာများ (Social Pathologies) ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ လူသားချင်းပြန်လှန်နားလည်မှုများလျှော့ကျလာခြင်း၊ လူမှုစုစည်းမှုများပြေလျှော့လာခြင်း၊ ခေတ်ထဲကူကယ်ရာမဲ့နှင့်သူစိမ်းဆန်သောအတွေ့အကြုံများခံစားလာရခြင်း၊ တာဝန်ယူလိုစိတ်မရှိတော့ခြင်း နှင့် လူမှုမတည်ငြိမ်မှုများ မှာ Lifeworld ကို System ကကြီးစိုးခြင်းရောဂါ၏ထင်ရှားသောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
သို့ဖြင့် ဟာဘားမားကိုဝေဖန်သူများက ဗဟိုလက်ဝဲယိမ်း ဂျာမန်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရေစီဟုဆိုပြီး Constitutional Welfare State ကိုအဆိုပြုလိုရင်းဟုဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ဟာဘားမားအနေဖြင့် မော်ဒန်ခေတ်ထဲ ဘာတွေမှားနေသလဲနှင့် ဘာကြောင့်မှားနေတာလဲဟု ထောက်ပြအဖြေရှာလိုရင်းသာဖြစ်သည်။ မော်ဒန်လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲ လူသားကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ စံနစ်တွေဘာလို့ရပ်တည်နေနိုင်တာလဲ။ လူတဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့်မဟုတ်။ ရှုတ်ထွေးေ၀၀ါးလွန်းသော Instrumental Reasoning ပုံစံများကြောင့်ဟုဆိုသည်။ ငွေ နှင့် အာဏာလွှမ်းမိုးထားသော စံနစ်ကြောင့်ဟုဆိုသည်။ ဆိုတော့ ဒီ ဈေးကွက်အရင်းရှင်စီးပွားရေး နှင့် အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုပုံစံကို ပယ်ဖျက်ပစ်ဖို့မဟုတ်ပေ။ သို့သော်ဘယ်ပုံထိမ်းသိမ်းထားမလဲ။ ဒါက လူမှပြဿနာဆိုတာထက် နိုင်ငံရေး နှင့်ပိုသက်ဆိုင်လာသောကိစ္စဖြစ်သည်။
System အမှားဟုဆိုကတည်းက အစိုးရယန္တရားသည်ပင်ပြဿနာကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဟာဘာမားအဖြေက Public Sphere ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးအရနိုးကြားသော၊ အကြမ်းမဖက်သော၊ တဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ကျင့်တန်ဖိုးကိုယုံကြည်သော လူမှုဝန်းကျင်ကို လူသားချင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ (Communicative Actions) ဖြင့်ပြန်လည် အသက်သွင်းဖို့ပင်ဖြစ်သည်။
Posted by KZကေ at 21:14
tin min htet September 15, 2010 at 9:48 PM
ကိုလွင်ပြောသလို အလုပ်လေးနည်းနည်းလျော့ပြီး လာဖတ်သွားပါတယ် :)
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) September 15, 2010 at 10:47 PM
ဖတ်ရတာ တကယ်ကောင်းပါတယ်၊ အများစု နားလည်နိုင်
အောင် ဇယားကွက်နဲ့ ပြရင် ပိုကောင်းမလားလို့၊ ဘလော့ပေါ်
မှာ ဇယားကွက် ဘယ်လို တင်ရမလဲဆိုတာ ကျနော်လည်း
မကျွမ်းကျင်ဘူးး)၊ စနစ်နဲ့ စနစ်လက်အောက်ခံ လူ့အဖွဲ့အစည်း
စီးဆင်းပုံတွေက တခါတလေ ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်စိလည်သွားမှာ
ဆိုးလို့ပါ၊ အခုလို ရေးပေးတာ ကျေးဇူးဗျာ။
T2A September 16, 2010 at 8:53 PM
ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ ။ System က Life World ကို ကြီးစိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့ ကိုယ်တွေက တစ်ပိုင်းတစ်စလောက်ပဲဖြတ်ပြီး ဖတ်ရလို.လားတော့မသိဘူး..........နည်းနည်းလေး နားဝေးသွားတယ် ။ အဓိက,က ငွေကြေးက လွှမ်းမိုးလာတာကို သိနိုင်မြင်နိုင်ဖို. လွယ်ကူပေမယ့် အစိုးရယန္တယားက လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်လာတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျတော့ မြင်ရတာ နည်းနည်းခက်သွားတယ် ။
မိမိတို.ရဲ. ရွှေပြည်ကြီးနဲ.တော့သွားနှိုင်းလို. မဖြစ်နိုင်ပေဘူးလို.ထင်သဗျာ ။ ကိုယ်တွေဆီကတော့ ဒါကြီးက အစကတည်းက ရှင်းနေပြီးသားမို.ပါ ။
"အမေးနွားကျောင်းသား" လို.ပဲ သဘောထားပါဗျာ ။
KZကေ September 18, 2010 at 1:11 AM
အလုပ်လျှော့ထားသောကိုတင်မင်းထက် :) နှင့်ဇယားရှုပ်ချင်သောကိုအောင် :) တို့ကိုကျေးဇူးတင်ရင်း
T2A ကိုစာပြန်ခဲ့ပါသည်။ :(
မှောင်သောညတွေပြီးရင်တွေ့မယ် ငြိမ်းချမ်းသော တို့ဘ၀တ...
၉။ ခိုင်လုံအမှန်ကိုတောင်းဆိုခြင်းပုံစံများ။ သီအိုရ...